सिस्नो खानुका फाइदा के के हुन त ? जान्नुहोस ! – Khabar PatrikaNp
सिस्नो खानुका फाइदा के के हुन त ? जान्नुहोस !
August 2, 2020 168
काठमान्डौ , सिस्नो प्रायः सबै ठाउँमा पाइन्छ । यसमा रहेको औषधि गुण र प्रभावकारीका कारण पछिल्लो समय सहरी क्षेत्र, होटल र रेष्टुरेन्टमा समेत यसको प्रयोग बढ्दो छ ।
सिस्नोलाई सुकाएर बनाएको धुलो सुपरमार्केटहरुमा प्याकमा समेत किन्न सकिन्छ । १० ग्राम सिस्नोको धुलोलाई करिब दुई सय मिलिलिटर तातोपानीमा रातभरि भिजाएर भोलिपल्ट बिहान खालि पेटमा खाँदा फाइदा पुर्याउँछ । सिस्नोमा ‘ए’, ‘सी’ र ‘डी’ भिटामिनसँगै पोटासियम र क्याल्सियमजस्ता पौष्टिक तत्व पाइन्छ ।यसमा करिब २५ प्रतिशत प्रोटिन हुन्छ । यसमा आइरनसमेत पाइन्छ ।सिस्नोमा फाइबरसमेत हुन्छ, जसले खाना पचाउन सहयोग गर्छ ।
सिस्नोले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतासमेत बढाउँछ । मधुमेहको रोगीका लागि सिस्नो लाभदायक हुन्छ । सिस्नोको धुलोलाई दाल र सुप बनाएरसमेत खान सकिन्छ । हरियो सिस्नोको मुन्टा टिपेर तरकारीको रूपमा समेत प्रयोग हुने गरेको छ ।
सिस्नो खानाले किड्नीको समस्या हुनबाट जोगाउन सघाउँछ । पिसाब पोल्ने समस्या छ भने सिस्नोको सुप लाभदायक हुन्छ । दम, बाथरोग, रगत उत्पादन गराउने, शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढाउनसमेत यसले सघाउँछ । सिस्नोको लेदोलाई मेहन्दी बनाएर कपालमा लगाउँदा कपाल झर्ने समस्या कम हुन्छ । भाँचिएको तथा मर्केमा, हाड जोड्न, हाड–जोर्नी दुखेकोमा पनि सिस्नो उपयोगी हुन्छ ।सुक्रबार
Prevएका बिहानै स्वच्छ मनले श्री पशुपतिनाथको दर्शन गरि साउन १८गते आइतबारको राशिफल पढ्नुहोस भेटि स्वरुप शेयर गर्नुहोस
Nextभाईरल फोटोको बास्तबिकता एस्तो रैछ,पहिलो पटक मिडियामा रुदै आय (हेर्नुस भिडियो)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुन। भोली कार्तिक ०७ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
सीमा प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी टोली भोकभोकै
गत २४ घण्टामा एक हजार ५५९ मा कोरोना पुष्टि,मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४९८
पेट्रोल बोकेर आएका ट्यांकरमा मट्टीतेल मिसाइएको भेटियो चालक, दुई पक्राउ
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (29524)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (28085)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (22076)
आफूनजिक रहेका मृत व्यक्ति कहिलेकाहीँ सपनामा आउँछन्? जान्नुहोस् कस्तो हुन्छ त यस्को फल
कोरोनालाइ लिएर अब डराउन पर्दैन
दहीसँग खानै नहुने यी चिजहरु
श्रीमतीको हातको थप्पड खाएर लज्जित भएका कलाकारहरु
रहस्यमयी गाउँ ‘मुर्दाको शहर’ को नामले परिचित, मानिस एकपटक गए पछि फिर्ता आउदैनन